Wareysiga lala yeeshay Nicholas Outa oo ka tirsan Jaamacadda Maseno, Kenya - AfricArXiv
Wareysigan wuxuu baaraya Mr. Nicholas Outa shaqadiisa cilmi baarista, waayo aragnimadiisa iyo dadaalkiisa.
Taariikhda shabakadda: ORCID iD // LinkedIn // Cilmi baaris // Aqoonyahan Google // waxaan Academia.e // Twitter
Nicholas waa 35 jir reer Kenya ah, waana arday dhakhaatiir ah oo ku takhasusay cilmiga Kalluumeysiga iyo Kalluumeysiga Jaamacadda Maseno, Kenya. Wuxuu haystaa shahaadada masters of Science (MSc) ee cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga iyo cilmiga maadiga iyo cilmiga loo yaqaan 'Limnology' iyo Wetland Management UNESCO-AKHRIS, Nederland iyo Jaamacadda BOKU, Vienna; iyo BSc ee sayniska biyaha ee la adeegsaday Jaamacadda Egerton, Kenya. Isaguba waa tababare dhanka qoraalka iyo isgaarsiinta cilmiga sayniska ee xarunta tababarka ee isgaarsiinta (TCC-Afrika) iyo lataliye cilmi-baarayaasha xirfadaha hore. Danaha Outa waxaa ka mid ah cilmi baaris ku saabsan teknolojiyadda biyaha, kalluunka deegaanka iyo sidoo kale isgaarsiinta cilmi baarista iyo daabacaadda, adeegga bulshada iyo baridda.
Mr. Outa wuxuu ku soo bandhigayaa Labeo victorianus (Ningu) hormoonka Ovaprim ee tijaabooyinka taranka
Waxaa laygu baray AfricArXiv iyadoo loo marayo Xarunta Tababarka ee Xiriirka (TCC-Afrika)
Miyaad hore ula wadaagtay natiijooyinka natiijooyinka kale ee waraaqaha daabacan ama xisaabaadka hay'ad? beer iyo miis labadaba
Haa waan haystaa OSF iyo Saynis Furan
Ku xidho / ku xayeysiintaada la aqbalay iyo shaqada la daabacay:
Teknolojiyada 'Freshwater Integrated Multitrophic Aquaculture (FIMTA)' ee Lake Victoria 'maqaal ku saabsan #ScienceOpen: https://www.scienceopen.com/document?id=31b054a2-aa2c-42cc-b58b-3b602a75ef4a
Waithaka, E., Yongo, E., & Outa, MAYA, Mr. (2020, Febraayo 29). Bayoolajiyadda dadka ee Niil tilapia, Oreochromis niloticus ee harada Lake Naivasha, Kenya. https://doi.org/10.31219/osf.io/p72h8
OTIENO, D., Hilda, N., Chrispine, N., Odoli, C., Aura, C., & Outa, MAYA, Mr. (2019, Diseembar 10). Biyaha Hyacinth (Eichhornia crassipes) oo ku faafay, isdhexgalka nafaqooyinka, biyo-biyoodka iyo weelka xakamaynta ee Winam Gulf, Lake Victoria, Kenya. https://doi.org/10.31730/osf.io/r67yj
Outa, MAYA, Mr, Mungai, D., & Keyombe, JLA (2019, Oktoobar 9). Saamaynta noocyada la soo bandhigay ee ku saabsan hab-nololeedka harada: Xaaladda harooyinka Victoria iyo Naivasha, Kenya. https://doi.org/10.31730/osf.io/b5nyt
Mungai, D., Outa, MAYA, Mr, Obama, P., Ondemo, F., & Ogello, E. (2019, Sebtember 20). Xaaladda cilmi baarista ee kalluumeysiga harada Victoria: Taariikh taariikheed iyo tan hadda jirta ee ku saabsan kalluumeysiga iyo deegaanka harada. https://doi.org/10.31730/osf.io/6gr7d
Outa, MAYA, Mr, Yongo, E., Keyombe, J., & David, N. (2019, Sebtember 17). Dib u eegis ku saabsan xaaladda qaar ka mid ah noocyada kalluunka ee harada Victoria. https://doi.org/10.31730/osf.io/je4cy
Daraasaddayda waxaa lagu qabtaa Kenya, inta badan hareeraha iyo hareeraha harada Victoria iyo harooyin kale oo ay ku jiraan harada Lake Naivasha
Su'aal ama caqabad noocee ah ayaad u jeedineysay inaad wax ka qabato markii aad bilawday shaqadan maxayna tahay daahfurnaanta kugu hogaamisay natiijooyinkaaga hadda?
Waxaa jira su'aalo badan oo aan laga jawaabin oo ku saabsan inta badan nidaamyada deegaanka biyaha ee Afrika iyo noocyada kalluunka ee ku jira. Waxay ku saleysan tahay aragtidan aan ku waday baaritaanka goobta iyo miiska labadaba si aan jawaabo ugu helo su'aalahan. Nusqaamaha cilmi-baarista ayaa ka jira dhowr meelood tan iyo inta badan cilmi-baaristu ay diiradda saareyso habab farsamo oo mararka qaarkood ka baxsan helitaanka ama fahamka cilmi-baarayaasha xirfadaha hore iyo aqoonyahannada. Sidaa darteed waxaan rabay in aan sameeyo cilmi baaris aasaasi ah si aan u fududeeyo fahamka wanaagsan ee kalluumeysiga iyo biyo-soo-saarka kalluumeysiga dhallinyarada jaamacadaha iyo kuleejka ee Afrika.
Sideed u aragtaa isgaarsiinta cilmi baarista ee Afrika?
Preprints iyo joornaalada saameynta sare ku leh Afrika waa mustaqbalka Isgaarsiinta Cilmi baarista Afrika. Joornaalada badankood waxay ku saleysan yihiin qaaradaha kale ee ka baxsan Afrika, iyagoo ka dhigaya diiradooda inaysan ahaanin qaaradda Afrika. Tani waxay markaa ku baaqeysaa in lagu keydiyo sida AfricArXiv oo u oggolaaneysa cilmi-baarayaasha Afrika inay sidoo kale daabacaan wax soo saarkooda cilmi-baarista, oo ay ku jiraan, luqadaha maxalliga ah iyagoo adeegsanaya PubPub, Ka dhigista cilmi baarista mid la heli karo oo sahlan oo la fahmi karo laguna dabaqi karo xaaladaha Afrika.
Furitaanka Furan waa in loo ololeeyo waana inay hadda ka dhacdaa ugu yaraan qaaradda Afrika.
Ma haysaa wax fikrado ah ama su'aalo ah Mr. Outa? Waad uga tagi kartaa sanduuqa faallooyinka ee hoose.
Tifatirayaasha: Johanssen Obanda
Tags: Baaritaan Afrikan ahSoo saarista cilmi baarista AfrikaResearchIsgaarsiinta Aqoonta